Hihaona amin'ireo maherifon'ny fizahantany ao amin'ny World Travel Market London anio
Home » Lahatsoratra farany farany » Associations News » Hihaona amin'ireo maherifon'ny fizahantany ao amin'ny World Travel Market London anio
Associations News • Vaovao • People • fanorenana • Tourism • Vaovao farany momba ny UK • WTN
Novambra 1, 2021
eTurboNews Juergen Steinmetz, izay filohan'ny World Tourism Network, ary mpikambana ao amin'ny Birao Mpanatanteraka ao amin'ny Birao Afrikana momba ny fizahantany dia tonga tany Londres ny alahady teo, vonona ny hijoro vavolombelona sy handray anjara amin'ny famerenana indray ny fampisehoana ara-barotra indostrialy fitsangatsanganana faharoa lehibe indrindra eran-tany - ny World Travel Market London 1-3 Novambra.
Androany, ny World Travel Market any London dia hanokatra ny varavarany amin'ny 10.00 maraina ao amin'ny Excel Exhibition Center any London.
Ireo mpitarika ny Travel sy ny fizahantany manerana izao tontolo izao dia any Londres indray hihaona, hiarahaba ary hifanakalo hevitra.
Ny World Tourism Network dia handray ireo Maherin'ny fizahantany anio, ny alatsinainy amin'ny 4.00 ora hariva ao amin'ny Kenya Tourism Board Stand AF 150
Tsy ny Tsenan'ny dia an'izao tontolo izao fotoana iray hamoronana, hamokatra ary hivarotra vokatra fitsangatsanganana vaovao amin'ny vanim-potoanan'ny COVID-19, fa fotoana iray ihany koa ho an'ireo izay mihetsika sy manozongozona ny indostria mba hitambatra indray. Ity fampiraisana ity dia tsy maintsy manana feo mahery mba hitarika ny dia hiverina amin'ny làlana.
"Mila hanjavona amin'ny dia indray ny fisafotofotoana.", hoy i Juergen Steinmetz. “Vonona handray anjara amin'ny adihevitra midadasika kokoa ny World Tourism Network. Tsy mbola misy ny raharaham-barotra toy ny mahazatra, ary ny fiaraha-miasa amin’ny mpiara-miombon’antoka rehetra no antoky ny fahombiazana”.
Maherifo fizahan-tany eken'ny Tambajotra fizahan-tany manerantany asaina ho amin'ny Kenya Stand (AF150) anio amin'ny 4.00 ora hariva. (1 Novambra) Hahafantatra mahery fo roa avy any Israely sy Barbados ny fikambanana- ary maro ireo mpitsidika tsy ampoizina no andrasana ho anisan'ity fivoriana NON ZOOM voalohany ity ho an'ny mpikambana WTN sy ny mpihaino WTM.
Ny World Tourism Network dia niforona ho ny Famerenana indray ny dia fifanakalozan-kevitra natomboka tamin'ity famoahana ity, ny PATA, ny Birao Afrikana momba ny fizahantany, ary ny Birao fizahan-tany Nepaley tamin'ny martsa 2020 teo anilan'ny ITB Berlin nofoanana.
Fivoriana zoom maherin'ny 200+ no namorona fiaraha-miasa amin'ny tontolon'ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany avy amin'ny firenena 128. Ny tanjona ho an'ny WTN dia ny hampiditra feo ho an'ireo mpilalao madinika sy salantsalany amin'ny indostrian'ny fizahantany sy fizahantany manerantany.
Ny maherifon'ny fizahantany voalohany, ny Hon. Najib Balala, Sekreteran'ny Fizahantany ho an'i Kenya no hampiantrano. Andrasana ihany koa ny hanatrika izany ny Hon. Edmund Bartlett avy any Jamaika, sy ny Dr. Taleb Rifai, Sekretera jeneralin'ny UNWTO teo aloha – samy anisan'ireo mahery fo ara-pizahantany voalohany neken'ity fikambanana ity.
Hampahafantatra ny maherifony momba ny fizahantany vaovao i Barbados ary antenaina hanatrika izany miaraka amin'ny minisitra, ny tale jeneralin'ny Birao Fizahantany, ary ny ekipan'ny fahitalavitra nasionaly.
Christian Rosario, eTurboNews maka sary mahafinaritra hozaraina ny mpaka sary nahazo valisoa tany am-boalohany.
Ny alarobia 11.30 maraina, ny Dr Peter Tarlow, filohan'ny WTN dia hanao lahateny amin'ny Session Cyber ​​Security ao amin'ny Travel Forward ao amin'ny World Travel Market.
Na dia eo aza ny fahatapahan'ny angon-drakitra lehibe indrindra tato anatin'ny taona vitsivitsy, dia mbola feno lavaka fiarovana ny indostrian'ny fitsangatsanganana. Ny zotram-piaramanidina lehibe sy ny rojon'ny hotely dia miady mafy amin'ny fiarovana ny sehatra an-tseraserany na dia taorian'ny fanitsakitsahana ny angon-drakitra teo aloha sy ny fanafihana an-tserasera dia nampiharihary ny mombamomba ny mpanjifa an-tapitrisany ary nahazo onitra avy amin'ireo mpandrindra ny fiainana manokana. Amin'izao fotoana izao, zava-dehibe ho an'ny indostrian'ny dia ny manaraka ny fiovan'ny fotoana sy ny fepetra ilaina hisorohana ny fandrahonana toy izany. Mandritra ity fotoam-pivoriana ity, ny tontolon'ny manam-pahaizana dia hizara hevitra momba ny dingana tokony hataon'ny indostria mba hiarovana amin'ny risika sy fandrahonana an-tserasera mba hiarovana ny angon'ny mpanjifany.
Ny World Travel Market dia hampiantrano ny Fihaonambe Minisitra UNWTO toy ny mahazatra amin'ny WTTC. Arabia Saodita amin'ity taona ity dia heverina fa hanana anjara toerana lehibe.
Hihaona amiko ao amin'ny WTM
Juergen Steinmetz dia vonona ny hihaona eTurboNews mpamaky mivantana ao amin'ny World Travel Market. Mifandraisa amin'ny WhatsApp: +1-808-953-4705 na mailaka [email voaaro]
Calzone sy Pizza: A Dynamic Duo Janoary 24, 2022
Ny Departemantam-panjakana Amerikana dia manomana ny Masoivohon'i Etazonia ao Okraina amin'ny fanafihana Rosiana Janoary 24, 2022
Ny Filoha Dr. Walter Mzembi no Fanantenana Vaovao ho an'ny fizahantany afrikanina Janoary 24, 2022
Miditra amin'ny lisitry ny lova UNESCO ny mozika rumba Kongoley Janoary 23, 2022
Ny UNDP dia manome aina vaovao ho an'ny fizahantany any Tanzania Janoary 23, 2022
Divay mamirifiry avy any Espaina Fanamby “Ireo lehilahy hafa” Janoary 22, 2022
Fikarohana vaovao: 19% mahomby amin'ny Omicron ny vaksiny COVID-90 Janoary 22, 2022
Ny New Northern Pacific Airways dia hanana endrika Alaska Janoary 22, 2022
Ny trano Champagne Frantsay dia mankalaza ny taona voarakitra ho an'ny bubbly Janoary 22, 2022
Mandray anjara amin'ny fametraham-pialana lehibe izao ny fandaharana amin'ny fahitalavitra ankafizin'ny Brits Janoary 22, 2022
Ny anjara asan'ny fiovaovan'ny toetr'andro izao amin'ny fitomboan'ny tahan'ny allergy Janoary 22, 2022
Fomba vaovao hisorohana ny voka-dratsin'ny fitsaboana amin'ny homamiadana Janoary 22, 2022
Ny Birao Charcuterie Vaovao Manaraka: Raiso ny Akondronao! Janoary 22, 2022
Data momba ny klinika vaovao tsara amin'ny marary voan'ny kanseran'ny tsinay Janoary 22, 2022
Lalana vaovao mankamin'ny diagnosy COVID-19 haingana kokoa voaravaka volamena Janoary 22, 2022
Ny mpandidy CHOP dia manasaraka ny kambana mitambatra izay ao an-trano ankehitriny Janoary 22, 2022
Sakafo hazan-dranomasina lehibe indrindra: Trondro manidina sy Cou Cou avy any Barbados Janoary 22, 2022
Manao tatitra momba ny toetry ny nosy izao ilay mpandraharaha sinoa any Tonga Janoary 22, 2022
Armani beauty dia manambara ny endrika hatsaran-tarehy vaovao Janoary 22, 2022
Ny fitsapana klinika vaovao dia mikaroka ny fanentanana ati-doha lalina hitsaboana ny Alzheimer Janoary 22, 2022
Jamaika dia hanao sonia MOU vaovao momba ny fampandrosoana ny fizahantany miaraka amin'i Espaina Janoary 22, 2022
Sidina mivantana maro eo anelanelan'i Etazonia sy Shina naato Janoary 22, 2022
TSA: Ny vahiny tsy ara-dalàna dia afaka mampiasa didy fampisamborana ho ID sidina Janoary 22, 2022
Irlandy hanafoana ny ankamaroan'ny fameperana COVID-19 rahampitso Janoary 21, 2022
Fialan-tsasatra amin'ny alina mahafaty any Cancun ho an'ny mpizaha tany Kanadiana 3 Janoary 21, 2022
Mampirehareha ny fizahan-tany Ogandey sy Afrikana ny fandefasana ny marika fizahan-tany vaovao “Explore Uganda”. Janoary 21, 2022
Trano fandraisam-bahiny RIU vaovao ao Trelawny amin'ny volana manaraka Janoary 21, 2022
Sandals Emerald Bay dia mampiantrano 2022 Korn Ferry Golf Tour ary manambara hetsika vaovao 2023 Janoary 21, 2022
Ny fizahan-tany Jamaika dia manamafy ny fifandraisan'ny fizahantany vaovao amin'ny Repoblika Dominikanina Janoary 21, 2022
Ny valan-javaboary Tanzaniana dia nomena anarana ho toerana tsara indrindra ho an'ny mpankafy an-kalamanjana Janoary 21, 2022
Miady amin'ny fahanterana amin'ny alàlan'ny fanokanana fotoana handaminana ny fialan-tsasatrao Janoary 21, 2022
Ny antsasaky ny Airbus Fleet dia tsy azo antoka araka ny Qatar Airways Janoary 21, 2022
Ny praiminisitra UK Boris Johnson dia nitana ny laharana ambony indrindra manerantany Janoary 21, 2022
Tatitra vaovao momba ny soritr'aretina amin'ny alina sy ny fiasan'ny andro amin'ny olon-dehibe voan'ny tsy fahitan-tory Janoary 21, 2022
Antibody vaovao dia manafoana ny Omicron sy ny karazany Janoary 21, 2022
Ny tranga vaovao momba ny PTSD, ny fahaketrahana ary ny fiankinan-doha dia nitombo hatramin'ny Omicron Janoary 21, 2022
Super Bowl Halftime: Inona no nofinofin'i Gary Grey izao? Janoary 21, 2022
Fitsaboana Fampiharana Fanafody Vaovao momba ny fivontosana mafy Janoary 21, 2022
Kia EV6 izao no nandresy ny fiara tamin'ny taona 2022 Inona no fiara? mari-pankasitrahana Janoary 21, 2022
Fitsapana klinika vaovao momba ny fitsaboana ny homamiadan'ny prostate Janoary 21, 2022